ခုနောက်ပိုင်းမှာ ချစ်စရာမျက်နှာပေးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ သူကတော့ မော်ဒယ်မလေး Ashley KoKoe ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား Body နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ မျက်နှာ၊ ချိုသာလှတဲ့အပြုံးလေးကလည်း သူမအလှကို ပိုပြီးအသက်ဝင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ တချိန်တုန်းက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်မှာ စိတ်အားငယ်မှုရှိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပ၇ိသတ်တွေကို မနေ့က အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ တချိန်တုန်းက ဝနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျပဲ သူမကိုသူမ ကြိုးစားပြီး ဝိတ်လျှော့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ပြောပြပြီး အရင်အချိန်က ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ယခုလက်ရှိအချိန်ဓာတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
2013 VS 2018 ?
ဟိုတနေ့က Koe ၁၀ တန်းပြီးကာစက ပုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်မိတယ်..2013 တုန်းက Koe နဲ့ 2018 Koe တော်တော်ကွာသွားတယ်..ပုံတွေမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Koe အရင်ကအရမ်းဝခဲ့တယ်..Koe ပေါင် ၁၄၀ တောင်ရှိတယ်..ဝတုန်းကဆိုရင် စိတ်တော်တော်လေးထိခိုက်ခဲ့ရတယ်..လူတွေကတွေ့ရင် ”ဝလာတယ်နော် ” ”ဝိတ်လျော့ပါဦး” ”ဟယ် ဝလာလိုက်တာ” စသဖြင့် မျိုးစုံကိုပြောကြတာ…စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ အပြင်ကို ဝ တာကို ရောဂါတခုလိုတောင် ခံစားခဲ့ရတယ်…ဘယ်သွားသွား confidence မရှိပဲ အားငယ်ရတယ်…
ဝိတ်လျော့တာ က အပြောလွယ် သလောက် အလုပ်ခက်မှန်း ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးမှသိတော့တယ်…ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာ တွေလုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ပဲ ကြိုးစားပြီး ဝိတ်ချတယ်..gym ဆော့တယ်..Gym ဆော့ရင်းပင်ပန်းပြီး motivation အရမ်းလျော့သွားတဲ့ အချိန်တွေလဲရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခု ကိုရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်..
Koe ကံကောင်းတာတစ်ခုက ဝိတ်တက်တာမြန်သလို ဝိတ်ကျဖို့လဲတော်တော်မြန်ပါတယ်..အဲ့တာကြောင့် Koe ရဲ့ Weight Loss Journey ကတော့ ၂လပဲကြာခဲ့တယ်..ဝိတ်ကျသွားတော့ ရလာတဲ့ confidence တွေအပျော်တွေ က ဘာနဲ့မှမတူပါဘူး…ဝ်ိတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Koe ဝိတ်က ၁၁၅ ပေါင်ပဲရှိတော့တယ်….❤️ဝိတ်ချဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေရော ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေရော Koe ရဲ့ post လေးကိုတွေ့ရင် motivation တခုခုရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..Don’t Give Up ပါနော်?..အားလုံးပဲဘဝမှာ confidence ရှိရှိနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ??? Don’t give up girls??…the world is yours??
သူမလိုပဲ ဝိတ်လျှော့ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အားမငယ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုးစားပြီးဝိတ်လျှော့ဖို့လည်း အားပေးလိုက်ပါသေးတယ်။We Love Cele
ခြင်းခတ်ပညာအစွမ်းကို ပြသခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Running Man ကိုတိုက်ခိုက်နေသူတွေကို ခုခံပြောဆိုလိုက်တဲ့ RM ရဲ့အမာခံပရိတ်သတ် ဧငြိမ်းဖြု